WAR DEG DEG AH: aqriso qaabkii uu u dhacay dilka jacfar kuukaay oo xalay la dilay | Xaqiiqonews
WAR DEG DEG AH: aqriso qaabkii uu u dhacay dilka jacfar kuukaay oo xalay la dilay
nin lagu magacaabo jacfar Kuukaay oo lagu sheegay in uu ahaa Amiirkii xarakada Al-Shabaab ee Xaafada Suuqa xoolaha Degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir ayaa xalay la dilay.
Xogta Jacfar wax badan lagama yaqaan balse saraakiil ka tirsan Df ayaa sheegay in u ahaa jacfar kuukaay nin ay Al-Shabaab dhawaan u soo Magacaaday Xaafada suuqa Xoolaha ka dib markii la bedalay Amiirkii Hore isagoona degay Nawaaxiga Maxkamadii Shabaab ee Suuqa xoolaha Xiligii Ay maamuli jireen Xamar.
ka dib dagaal culus oo ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada heliwaa ayaa warbaahinta ku hadasha afka dowladda waxa ay tabisay in dagaalka uu ahaa howlgal lagu soo qabanaayey jacfar kuukaay balse jacfar uu amr diido sameeyey halkaan uu ku dagaalamay taas oo keentay in uu dagaalka ku dhinta jacfar.
dhanka kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay alshabab oo ku aadan arintan .
degmada heliwaa gaar ahaan suuqa xoolaha ayaa caan ku ah in habeenkii ay iskaga soo baxaan ciidmada dowladda iyadoo halkaasi aya ka taliyaan habeenkii xarakada alshabab.